कागेश्वरीमा किन हुन सकेन गठबन्धन? | Alagdhar
घरBanner Newsकागेश्वरीमा किन हुन सकेन गठबन्धन?
काठमाण्डौ १७ बैशाख
सत्ता साझेदार दलहरु विच स्थानिय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अगाडी बढ्ने सहमती भएपनि काठमाण्डौ जिल्ला अन्र्तगत रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा भने त्यसले काम गरेन । सो नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उपेन्द्र कार्की, नेकपा एकिकृत समाजवादीको तर्फबाट वर्तमान मेयर कृष्णहरि थापा र नेकपा एमालेको तर्फबाट रामशरण ढुङगाना चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । सो नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी विच चुनावी तालमेल भएको छ । जस अनुसार केही वडा सदस्यहरु र उपमेयर माओवादीले पाएको छ । माओवादीको तर्फबाट भोला चापागाई उपमेयरको उम्मेदवार बनेका छन् । सो नगरपालिकामा सहमती बमोजिम समाजवादीले मेयर पाउने चर्चा चलेको थियो ।
अन्तिम समयसम्म पनि सो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद बनेका माधव नेपाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा विच सहमतीका लागी छलफल चलेको थियो । श्रोतका अनुसार संसदीय निर्वाचनमा माधव नेपाललाई सघाउने विषयमा सहमती बनेको बुझिएको छ । सोही अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाको ३२ वडा र शंकरापुर नगरपालिका समाजवादीलाई छाड्न कांग्रेस तयार भएको हो ।
वर्तमान मेयर कृष्णहरि थापाले कुनै पनि हालतमा आफु नछाड्ने र सहमती हुन नसके एक्लै भएपनि चुनावी मैदानमा जाने बताउदै आएका थिए । माधव नेपालले सहमती गराउन अन्तिम समय सम्म प्रयास गरेपनि त्यो सफल हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसले यो पटक कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान लिएको थियो । बरु त्यसको बदलामा अन्य स्थानमा सहमती गर्न सकिने भनेर नेताहरु विच भएको छलफलमा बताएको श्रोतले जनाएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार माधव नेपालले आफनै क्षेत्रमा पनि अडान लिन नसकेको भन्दै कृष्णहरि थापा असन्तुष्ट देखिएका छन् । माधव नेपाल निकट श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार उपमेयर र केही वडा लिएर कांग्रेसलाई मेयर दिने विषयमा पनि छलफल चलेको थियो ।
तर कृष्णहरि थापाले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो हुन सक्दैन भनेपछि सो विषय पनि ओझेलमा परेको थियो । नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष पनि मेयर कृष्णहरि थापालाई दिएर उपमेयर र बहुमत वडाहरु लिएर निर्वाचनमा जान सकिने भनेर प्रयासरत थिए । तर अन्मित समयसम्म पनि सहमती हुन नसकेपछि सवै पक्ष आ आफनै लाइनमा निर्वाचनमा जान बाध्य भएका थिए । अन्य पार्टी भन्दा कमजोर रहेको माओवादीले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न इच्छा जनाए पछि नेपाली कांग्रेसलाई मेयर पद लिएर गठबन्धन गर्न थप सहज भएको बुझिएको छ । यो गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनलाई केही सहज हुने अवस्था देखिएको छ ।
अघिल्लो लेखमाटोखा कांग्रेसमा खटपट
अर्को लेखमाधिरज सिंह बने आईजिपि, अरु ए आई जि अदालत जाने तयारीमा